Xaas madaxweyne oo lagu haysto fargashi 1.4 milyan oo doolar
Home WARARKA Xaas madaxweyne oo lagu haysto fargashi 1.4 milyan oo doolar
Mid ka mid ah jaraa’idka ka soo baxa dalka Zimbabwe oo lagu magacaabo Independent ayaa boggiisa hore saaka ku soo daabacay sheeko ku saabsan in dacwad lala tiigsaday xaaska madaxweyne Rubart Mugabe ka dib markii laga war helay inay dalbatay fargashi qiimihiisu gaarayo 1.4 milyan oo doolar.
Fargashiga ayaa looga gol lahaa in madaxweynuhu xaaskiisa hadiyad uu uga dhigo sanad guurada 20-aad ee guurkooda ka soo wareegtay. Kuwaas oo is guursadau bisihii August ee sanadkii1996-kii,
Grace Mugabe ayaa fargashiga ka dalbatay qof dahabka iibiya iyadoo loo maray nin ganacsade ah, waxaa kaloo wararku leeyihiin waxaa dacwadda qayb ka ah mid ka mid ah wiilasheeda oo lagu magacaabo Russell Goreraza iyo waardiyaheeda.
Qorshihii Fargashiga loogu keeni lahaa Grace Mugabe ayaa dhicisoobay ka dib markii qofkii ka soo qaadi lahaa magaalada Dubai uu diiday in uu qaado, waxaase xaaladda sii adkeeyey markii qofkii laga soo iibinayey uu diiday in lacagta uu celiyo si dhamaystiran balse uu lacagta dib u celinayo si qayb qay ah.
Previous articleXusuusta maanta oo kale 1992: marines-ka Mareykanka oo ka degay Soomaaliya
Next articleANSHAX HEES QISO DHABA DHIBANE OFFICIAL SONG 2017